I-Miriam's Cottage yayiqukethe i-Bed and Breakfast - I-Airbnb
I-Miriam's Cottage yayiqukethe i-Bed and Breakfast
Tanunda, South Australia, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Alicia
Leli kotishi elihle lango-1920 litholakala emgwaqeni othule okleliswe enhliziyweni yeTanunda.
I-Miriam's iwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya ezitolo nasezindaweni zokudlela ezifana neFerment Asian, 1918, Musque and cafe's. Futhi ibanga lokuhamba eliya eLangmeil Winery, Peter Lehmann, Z Wines njll
Ukunikezwa kwesidlo sasekuseni kukhona ukuze izihambeli zibe nesidlo sasekuseni esiphekiwe sikabhekeni, amaqanda, utamatisi, amakhowe noma ibhulakufesi lezwekazi, izithelo, iyogathi, ubisi, ijusi yewolintshi, itiye, ikhofi
Kufakwe nepuleti likashizi nebhodlela lewayini.
Igumbi lokulala elilodwa linombhede we-Queen.
Igumbi lokulala lesibili linokukhethwa kwemibhede emibili eyodwa noma lokhu kungaba umbhede weNkosi. Ilungele abashadayo noma abangashadile. Sicela ucacise lokhu uma ubhukha uma udinga imibhede ekamelweni lesibili kudingeka kube ngabantu abangashadile.
I-Tanunda isenkabeni ye-Barossa futhi iseduze nazo zonke izinsiza. I-Miriam's Cottage isemgwaqweni othule kakhulu kodwa iseduze kakhulu nayo yonke into. Ukuhamba ibanga ukuya ezitolo, izindawo zokudlela, ipaki, ibhusha, indawo yokubhaka
Izivakashi zingahlala zingishayela ucingo uma kukhona okudingekayo noma nini. Kukhona ifolda elisetafuleni lasekhishini elinolwazi oluningi kuyo, njengamamenyu athile wendawo yokudlela, imininingwane yokungena kwi-wifi namaphasiwedi. Landa imiyalelo ye-TV(amamuvi). njll.
Abaqhubi bezokuvakasha njll.
Izivakashi zingahlala zingishayela ucingo uma kukhona okudingekayo noma nini. Kukhona ifolda elisetafuleni lasekhishini elinolwazi oluningi kuyo, njengamamenyu athile wendawo yokud…
Hlola ezinye izinketho ezise- Tanunda namaphethelo